Maqaalka Ashley Walsh ee Martech Zone |
Maqaallada by Ashley Walsh
Ashley waa kuxigeenka Suuq geynta at Qalabaynta, Qaab dhismeedka Indianapolis-ku-saleysan iyo xalka software-ka qabashada xogta. Kahor Formstack, Ashley wuxuu 8 sano ku qaatay Angie's List isagoo xilal ka haya suuqgeynta, wax soo saarka, iyo howlaha.
Waa maxay Suuqgeynta Daryeelka Caafimaad?
Talaado, Disembar 4, 2018 Jimco, Diisambar 7, 2018 Ashley Walsh
Markii aad gasho shil baabuur, aad hoos u dhacdo ama aad la kulanto nooc kale oo dhaawac halis ah, waxa ugu dambeeya ee aad u maleyneyso inaad ka fekereyso ayaa ah qolka gurmadka ee aad rabto inaad booqato iyadoo lagu saleynayo warshaddii ugu dambeysay ee ganacsiga, boorarka ama joornaalka emailka ee aad aragtay . Musqusha iibku runtii ma khusayso inta lagu jiro xaalad degdeg ah. Si kastaba ha noqotee, suuqgeynta daryeelka caafimaadku waxay aad uga badan tahay suuqgeynta waaxyada xaaladaha degdegga ah iyo qeybaha daryeelka degdegga ah. Isbitaalada, rugaha daryeelka degdegga ah, iyo xarumaha caafimaadka ayaa ka mas'uul ah
Sida Loo Agtiisameeyo Qulqulkaaga Suuqgeynta Wax Soo Saarka Kordhinta
Talaado, September 27, 2016 Talaado, September 27, 2016 Ashley Walsh
Miyaad halgan ugu jirtaa inaad kobciso wax soo saarka ganacsigaaga oo dhan? Hadday sidaas tahay, keligaa ma tihid. ServiceNow ayaa soo warisay in maareeyayaasha maanta ay qiyaastii 40 boqolkiiba usbuucii shaqada ku bixinayaan howlaha maamulka - taasoo la micno ah inay heystaan ​​in ka badan kala badh usbuucii inay xoogga saaraan shaqada istiraatiijiga ah ee muhiimka ah. Warka wanaagsani waa inuu jiro xal: automation socodka shaqada. Sideetan iyo lix boqolkiiba maamulayaasha ayaa rumeysan in howlaha shaqada otomaatigga ah ay kordhin doonaan wax soo saarkooda. 55 boqolkiiba shaqaaluhuna way ku faraxsan yihiin